Allgedo.com » 2012 » October » 31
Home » Archive Daily October 31st, 2012
Dhalinyarada Gelinsoor oo shalay Deeq Lacageed Ka qeybisay Magaalada Dhabad (sawiro)
Dhabad, Somalia (AOL) – Waxaa deeqdaan loo qeyshay dad kor u dhaafaya boqol qof kuwaas oo iskugu jira caruur agoon ah iyo dad masaakiin ah oo magaalada ku nool, dadkii la gaarsiiyey deeqdaan ayaa soo dhaweeyey ayagoo sheegay in ay tahay deeqdii ugu horeeysay oo dad intaan la’eg ay u qeybshaan dad u dhashay deegaanka, waxayna intaas ku dareen in ururka GUYO yahay ururkii ugu...
Odoyaasha dhaqanka Gobolka Gedo oo soo Bandhigey Magacyada iyo goobaha ay dad rayid ah Ciidamada Kenya ku dileen deegaano ka kala tirsan Gobolada Gedo iyo J/hoose (Aqri Magacyada)
Baardheere, Somalia (AOL) – Waxaan halkani kusoo bandhigayaa dhacdooyinkii ugu dambeeyey iyo weliba Qaabka loo diley 34 ruux iyo dad dhaawac ah oo dhamaantooda ah dad rayid ah oo gaaraya ilaa 52 qof. Deegaanada Kenya ay duqeysay iyo kuwa sida gaarka ah dadka loogu diley 10kii Bilood ee u dambeeyey ayaa waxaan ka xusi karnaa Yaaqle, Ceelcade, Baardheere, Likooley, Tafey, Tarako, Qeyd shamal, Faafaxdhuun,...
Dhaq dhaqaaqyo lagu magacaabayo Xukumada cusub oo socda iyo Wariyaasha oo loo yeeray
Wararka ka imaanaya xarunta madaxtooyada ayaa sheegaya in lagu wado in goordhow lagu dhawaaqo Golaha Wasiirada. Waxaa soo dhamaaday latashiyadii ugu danbeeyay ee lagu magacaabayo Xukumada taas oo tirada laga dhigayo uu khilaaf ka taagnaa. Hase ahaatee warar ay AOL heshay ayaa sheegaya in Dr Saacid iyo madaxda kale ee dowlada ay ku heshiiyeen in wasiirada la magacaabo. Waxaa jira guux badan oo sheegaya...
Al-Shabaab oo qof rayid ah ku dilay duleedka Baardheere
Wararka naga soo gaaraya Magaaladda Baardheere ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in kooxda Shabaab ay halkaas ku dileen nin reer Miyi ah. Alla ha unaxariistee Maxamuud Ibraahim Nuur oo kamid ahaa xoola dhaqatada Baardheere ayay toogteen Shabaab. Inkastoo aan la ogayn sababta ay Marxuumkan Shabaab udileen hadana qaar kamid ah qaraabadiisa ayaa AOL usheegtay in Shabaab ay ninkan oo oday ah ku eedeyeen in...
Sargaal katirsan ciidamada dowlada oo Beledweyne lagu dilay
Wararka naga soo gaaraya Magaaladda Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in maanta lagu dilay sargaal katirsan dowlada Soomaaliya. Askari katirsan ciidamada dowlada ayaa toogasho ku dilay Sargaalkan oo lagu magacaabi jiray Muumin Maxamed Maxmuud Ildhigte. “Waxaa dilka Taliyaha ka danbeeyay askari katirsan ciidamada dowlada ee magaaladda beledweyne’ayuu sheegay Sargaal katirsan...
19 Jir Soomaali ah oo Madaxa Looga toogtey Dalka South Afrika (Daawo Sawarida + Muuqaal)
Al-Shabaab isa soo dhiibay oo lagu soo bandhigay Beledweyne
Magaaladda Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa lagu soo bandhigay dhalinyaro kasoo goosatay Shabaab. Dhalinyarada soo goosatay ayaa gaaraya ilaa 10, waxaana ay ka bar baradaalami jireen Shabaab-ka kusugan gobolkaas. Isagoo lahadlayay saxaafada ayaa Gudoomiya kuxigeenka gobalka Hiiraan Axmed Ismaan Cabdalla (Inji) ayaa sheegay in dhalinyarada isa soo dhiibtay ay yihiin 10. Waxaa uu hadalkiisa ku...
Yaa yiri ISBADAL baa dhacay? Yaa yiri marxalad cusub baa la galay? Yaa yiri murankii Madaxda waa laga gudbay?
Yaa yiri ISBADAL baa dhacay? Yaa yiri marxalad cusub baa la galay? Yaa yiri murankii Madaxda waa laga gudbay Yaa yiri Profyadan ayaa wax tari kara? Yaa yiri khilaafkii baa dhammaaday? Yaa yiri is qabqabsigii baa idlaaday? Yaa yiri is maandhaafkii baa haray? Yaa yiri waxaa la galay xilligii dib u dhiska dalka iyo dib u deginta dadka? Yaa yiri waxaa la gaaray bisayl siyaasadeed? Yaa yiri AL baa laga...